I-Beck Plaza eyandisiweyo yokuhlala iSuite A - I-Airbnb
I-Beck Plaza eyandisiweyo yokuhlala iSuite A
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSommer And Russell
USommer And Russell yi-Superhost
Entsha kraca ngoDisemba ka-2018, uDuane kunye noSandy Beauchamp bakhe i-Extended Stay apartments e-Beck Plaza. Badale indawo entle, bayigcina icocekile, kwaye baphatha iindwendwe zabo ngokungathi bafuna zibuye :-) Sizimisele ukuqhubeka nelo lifa!
Sinikezela ngesaphulelo esikhulu kakhulu kumntu ofuna ukurenta indawo ubusika bonke (ubuncinci ngoJanuwari ukuya kuMatshi). Ezinye izaphulelo zisebenza ngokuhlala okwandisiweyo kwiinyanga ezibandayo ezingekho iinyanga ezi-3 okanye ngaphezulu- vele usithumelele umbuzo ngeentsuku zakho ezithile, kwaye siya kukwazisa ukuba inokuba yintoni itotali yakho.
4.87 · Izimvo eziyi-70
Sisembindini wedolophu yase-Escanaba, eneendawo zokutyela ezininzi, iibhari, kunye neevenkile ezikufutshane. Siziikhilomitha ezimbalwa ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kwaye ngaphantsi kweemayile ukusuka emanzini!
Umbuki zindwendwe ngu- Sommer And Russell
Siza kufumaneka ngefowuni, ngetekisi, okanye nge-imeyile xa usifuna.